Rishi Kapoor Oo Seeftiisa Kala Dul Dhacay Atirishadii 90-maadii Caanka Ahayd Farah Naaz - Hablaha Media Network
Rishi Kapoor Oo Seeftiisa Kala Dul Dhacay Atirishadii 90-maadii Caanka Ahayd Farah Naaz
HMN:- Ruug cadaa Rishi Kapoor wuxuu dhawaanahan qabatimay inuu dadka caanka ah baraha bulshada ku weeraro asigoo soo dhigo hadalo muran badan dhaliyaan.
Rishi Kapoor haatan wuxuu bartiisa Twitter-ka ku karbaashay atirishadii 90-maadkii caanka ahayd Farah Naaz sidoo kalena waxay la dhalatay atirishada Tabu.
Rishi Kapoor qoraalkan ayuu barta Twitter-ka soo dhigay “Farah Naaz waxay ka mid ahayd atirishooyinkii ugu qurxanaa uguna cajiibka badnaa ee Bollywood-ka soo maray, waana walaasha ka weyn Tabu, waxay noqon laheyd atirisho weyn hadii ay ahaan laheyd qof shaqadeeda si dhab ah u qabaneyso!”
Dabcan Rishi Kapoor ma uusan sheegin sababta uu Farah Naaz ugu tilmaamay qof shaqadeedii aan si dhab ah u qaban jirin oo seeg seeg ku ahayd hawlaheedii fanka Hindiya.
Balse waxaa xusid mudan in Rishi Kapoor iyo Farah Naaz inay isla sameeyeen filimo caan ah oo ay ka mid yihiin Naqab, Naseeb Apna Apna iyo Ghar Ghar Ki Kahani.
Farha Naaz filimadeedii ugu dambeeyay oo ay kasoo muuqatay waxaa ka mid ahaayaan Hulchul (2004) iyo Shikhar (2006).
Tolow Farha Naaz maxay kaga jawaabi doontaa hadalka Rishi Kapoor kasoo yeeray sidoo kalena Tabu maka aamusi doontaa Rishi oo walaasheed weerar toos ah ku qaaday.